JOSM - CAD hanovana data ao amin'ny OpenStreetMap - Geofumadas
Jolay, 2015 Cartografia, Pirinty voalohany
OpenStreetMap (OSM) angamba iray amin'ny ohatra lehibe amin'ny fomba ahafahan'ny fampahalalana omena amin'ny fomba fiaraha-miasa manangana modely vaovao fampahalalana cartografika. Mitovy amin'ny Wikipedia, nanjary zava-dehibe ny fandraisana andraikitra ka anio ho an'ny geoportal dia aleony apetraka any aoriana io sosona io noho ny manahy momba ny fanavaozana ny mombamomba anao amin'ny lafiny toy ny teboka mahaliana, orinasa na data izay tsy ho azo havaozina.
Mampiasa OSM tetikasa Cadastral afaka mandeha momba ny raharaham-barotra, hevi-dratsy, ary ny eo an-toerana SARITANY manokana, mamela ny boky antontan-kevitra ireo ny olona nohavaozina, raha azo atao hampiroborobo ny fiaraha-miasa, na dia fantany fa raha toa ka tsy nohavaozina ny faritra misy, Indray andro dia hisy izany, satria zavatra tsy hay ambara izany.
Maro ny fomba hafa hanavaozana ny vaovao ao OpenStreetMap. Miankina amin'izay handeha ny safidy, ny safidy hanaovana an-tserasera na amin'ny finday dia mora ho an'ny teboka an-dalambe izay noforonina tamin'ny fandikana sary fotsiny. Fa raha manantena izahay fa hanao topolojia henjana kokoa, miaraka amin'ny sari-tany amin'ny endrika DXF, GPX na hoe mpankafy CAD isika, ny vahaolana mahaliana dia ny JOSM, ilay fitaovana mpanjifa novolavolaina tany Java.
Ohatra iray ity, izay efa lany daty ny sosona OSM. Hitako io satria ny sary Google dia vao haingana noho izay asehon'ny OSM, mazàna Bing, izay any amin'ny firenena vao misondrotra dia tena mahantra.
Ny sari-tany dia mampiseho hoe inona io faritra io dia toy ny roa taona lasa izay.
Ny sary dia mampiseho ny fomba nanombohan'ilay fifandimbiasana tamin'ny herintaona.
Ny programa JOSM dia somary mora ampiasaina ho an'ny olona rehetra izay nampiasa programa toa ny AutoCAD na Microstation. Satria miorina amin'ny Java izy io, sehatra hafa ary rehefa sintomina dia vonona hiasa fotsiny. Araka ny hitanao, amin'ity sary avy any Bing ity dia misy olona manavao ireo sari-tany.
Ny fanindriana ny bokotra Download dia mampihena ny faritra mahaliana ny format ve ny rafitra, manitsy, mamafa na manampy.
Amin'ity tranga ity dia te-hanavao ny tetezana tsy mitovy aho. Ny tontonana dia mamela anao hisafidy izay sosona tianao haseho, miaraka amin'ny fetra tsy ahafahan'ny Google Background Images alaina noho ny politikan'ny OSM hialana amin'ny fifanolanana amin'ny zon'olombelona, ​​fa koa satria ny famindrana ireo sary dia mety hiteraka fifanolanana sarotra tanterahina .
Safidy iray ny mandeha eo ambonin'ny tetezana, ampiasana ireo GPS finday ary ampidino ny angona avy eo. JOSM dia manohana ny fanokafana angona sary georeferencing, DXF, endrika azo amin'ny GPS toy ny GPX, NMEA, ary koa ny famoahana serivisy WMS, ankoatry ny hafa.
Mba hanitsiana na fanavaozana dia tsy maintsy manana mpampiasa ianao, izay maka minitra vitsy ao amin'ny pejin'ny OpenStreetMap.
Famoahana ny data
Ny tontonana dia mampiseho ny sarin'ny Mianara miafina, mialà, ahemoy.
Raha hisafidy izay andrasana ho hita ao amin'ity tontonana ity, safidio ny sary an-tsary ambony - ary eto dia misy ny Bing, Mapbox Satellite, Mapquest Open Aerial, lalana mankany wms na sary nalaina niaraka tamin'ny fampiasa nateraky ny programa.
Azonao atao ihany koa ny misafidy ny fomba hanandramantsika hahita ireo singa venty.
Amin'ny ambaratonga fampandehanana dia mila mianatra fika fitendry na famoritana totozy ianao satria voafetra ny bokotra zoom. Ny sign + dia Zoma, ny - sign dia zoom, araka izay tiako, tsy hitako ny bokotra iray hikorisa (vilany).
Rehefa mikitika ireo zavatra ireo ianao, ny safidy mifototra amin'ny kontexa dia alefa, toy ny fanovana ny orinasam-pandehanana iray, mitohy na mampiditra fehy.
Tsy maintsy milalao miaraka amin'ny menio ianao mba hijery ireo sehatra efa misy, ary jereo koa ny isan'ireo plugins mba hisafidianana izay mety ho liana amin'ny download.
Mba hanitsiana ny tsipika izay miova endrika, tsy maintsy nifindra node fotsiny aho, ary ny mikasika ny afovoan'ny segondra dia mamorona node vaovao nefa tsy misy fahasarotana be. Mba hanitsiana node izay ifanarahan'ny tsipika roa dia nokasihiko ny tampon'ny vertex sy ny safidy tapaka, na dia aleoko nanao node teo aloha, manapaka sy mamafa ny ampahany be loatra. Avy eo ireo zavatra dia tsy maintsy omena izay izy ireo, raha toa ka làlana lehibe ireo, mpampitohy ny làlambe sy manondro raha manana lalana iray na roa izy ireo.
Naka fotoana ihany koa aho hanitsiana andalana maromaro teo akaiky teo izay nanatsofoka loatra ary nanampy ampahany roa aho, na dia tsy hita ao amin'ny sary Google aza izy ireo, fantatro izany satria isa-maraina aho no mandalo eto rehefa mandeha miasa aho.
Farany, rehefa avy nilalao nandritra ny fotoana fohy, dia nitohy ny asa.
Rehefa mampakatra ny angon-drakitra, manamarina ny tsy fitoviana, toy ny node tsy mifandray, ny rafitra miaraka amin'ny safidy hanatobiana ny faritry ny fifandonana. Tena kely dia kely no mitranga satria ny snap dia miasa sy azo ampiharina. Izy io koa dia manamarina ireo topolojia mifanindry mitovy karazana sy fifandraisana hafahafa eo amin'ny làlan'ny lalana. Ny lafiny hafa izay manamarina azy dia ny fifanolanana amin'ny angona hafa izay mety misy olona mampakatra avy amin'ilay faritra iray ihany.
Raha vao nakarina dia ahitanao ny fanovana haingana dia haingana any OSM.
Miantso ity sarintany ity izahay.
Manoro hevitra aho hijery ny Fanolorana nataon'i Jorge Sanz, miaraka amin'ny antontan'isa, ny angon-drakitra sy ny zava-bitan'ny OpenStreetMap izay manampy antsika hahatakatra hoe ohatrinona isika no manokatra ny saintsika amin'ny modely ho an'ny crowdsourcing.
Ampitahao OpenStreetMap miaraka amin'ny sarintany hafa
Previous Post«Previous Topografia nentim-paharazana vrs. LiDAR. Fahamarinana, fotoana ary vidiny.
Next Post Mampidira ny angona avy amin'ny OpenStreetMap mankany QGISmanaraka »